ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှ ဓမ္မကထိကခေါ်ထိုက်သလဲ ?
ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှ ဓမ္မကထိကခေါ်ထိုက်သလဲ ?
အမရပူရမြို့ ၌ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်
ဟောကြားသည့်နေ့ ( ၁၀ - ၃ - ၁၃၅၄ )
ဒကာ၊ဒကာမတွေ တရားများများမလိုက်ဘဲနဲ့၊ ဧကောဓမ္မောဆိုတဲ့အတိုင်း တရားကိုတစ်ခုတည်း အားထုတ်ပါ။ မိမိတို့ဥာဏ်ထဲမှာ အမြင်ဆုံးအထင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာသုံးမျိုးကိုပဲခင်ဗျားတို့ ကြည့်လို့ရှိရင် လိုရာခရီးကို မုချအားဖြင့် ရောက်မယ်ဆိုတာ ယနေ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက တိုက်ရိုက်ဟောပြီ … (မှန်လှပါဘုရား ) ။
ယနေ့တိုက်ရိုက်ဟောပြီ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက၊ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၊ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော၌ သီတင်းသုံးတော်မူတယ်၊ ထိုသို့နေတော်မူတဲ့အချိန်၌ ရဟန်းတစ်ပါး
ကလျှောက်တယ်၊ ပုစ္ဆာသုံးချက်ကိုလျှောက်တယ် ။
အရှင်ဘုရားတဲ့ - ဓမ္မကထိကဆိုတာ ဘယ်လိုဟာ ဓမ္မမထိကပါလဲ၊ ဘယ်လိုဟာ ဓမ္မကထိကလဲလို့ (၁) နံပါတ်မေးလိုက်တယ် ။
( ၂ ) နံပါတ်ကတော့ ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့ ဆိုပါသလဲ ။
( ၃ ) နံပါတ်က ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန - ယခု ဘ၀နိဗ္ဗာန်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုလို ပါသလဲ ။
ပုစ္ဆာဘယ်နှစ်ချက်လဲ - ( သုံးချက်ပါဘုရား ) ၊ သုံးချက်၊ သုံးချက် ။ ဒကာ ဒကာမတို့ - ခင်ဗျားတို့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်သည် မည်မျှလောက်ခရီးရောက်နေတယ်ဆိုတာ၊ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီး အခုရဟန်း မေးတဲ့ အဖြေကို ဖြေရတဲ့ အခါကျတော့ သြော် - အားလုံးတရားနာပြီးတရားတွေ ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်၊ အား ထုတ်နေကြတဲ့အလုပ်ဟာ ၊ သာမည ခရီးပေါက်လို့ သာမည ရောက်နေတာမဟုတ်ပါလားဆိုတာ ဒီပုစ္ဆာတွေကို ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက အဖြပေးတဲ့ အခါကျတော့မှ မိမိတို့မှာ ၀မ်းမြောက်ဖို့ရာ တွေ အများကြီး ပေါ်လာတာ ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
( ၁ ) အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဓမ္မကထိကဆိုရမလဲ
အဲဒီတော့ ဒီမှာ ပါဠိတော်က -
ဓမ္မကထိကောတိ - ဓမ္မကထိကဟူ၍၊ ၀ုစ္ဆတိဟောတော်မူအပ်ပါသနည်း၊ ဓမ္မကထိကကောတိ ဓမ္မကထိကဟူသည် အဘယ်မျှလောက်၊ အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဓမ္မကထိကဆိုလိုပါသလဲ၊ ဒါကြောင့် ဓမ္မကထိကော၊ ဓမ္မကတိကောတိဘန္တေ - ဆိုပြီး အရှင်ဘုရား ဓမ္မကထိကဆိုတာ ဘယ်လိုဟာ ဓမ္မကထိက၊ ဓမ္မကထိကအဖြစ်နဲ့ တပည့်တော်တို့က မှတ်ယူပြီးနာရမှာလဲ၊ မမေးသင့်ဘူးလား ( မေးသင့်ပါတယ် ) မေးသင့်တယ်တဲ့ ။
မေးသင့်တော့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဖြေရှာတယ် ၊ ( တင့်ပါ ) ဒီလိုမှတ်ပါကွာတဲ့ - ဓမ္မကထိကဆိုတာ ဝေဒနာယစေ ဘိက္ခု နိဗ္ဗိဒါယ ၀ိရာဂါယ နိရောဓါယ ဓမ္မံဒေသေတိ
ဝေဒနာသည် ဒကာ ဒကာမတွေ နိဗ္ဗိန္ဒာရ - ငြီးငွေ့အောင် ဟောနိုင်လို့ရှိရင် ဝေဒနာအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းပြောပြီးဝေဒနာကို ငြီးငွေ့ရွံမုန်းလာလောက်အောင် ဟောနိုင်လို့ရှိရင် ဝေဒနာယစေဘိက္ခနိဗ္ဗိ ဒါယ ၀ိရောဂါယတဲ့ ဝေဒနာအကြောင်းကို နည်းနည်းမှ ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးနဲ့ကို ဆက်သွယ်လိုစိတ်ကို မရှိချင် အောင် ဟောနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ( မှန်ပါ့ ) ။
ဝေဒနာကြီး လုံးလုံးချုပ်ပျောက်သွားရင်ဖြင့် သေသေချာချာကောင်းမှာပဲလို့ ဥာဏ်ထဲရောက်အောင် ဟောနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဓမ္မကထိကလို့ ဆိုရမယ်ကွတဲ့ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဓမ္မကထိက၊ ဓမ္မကထိကဆိုတာပေါ်လာပြီလား ( ပေါ်လာပါပြီဘုရား ) ဒါကြောင့်ဘုရားက ဝေဒနာ ယစေ ဘိက္ခု နိဗ္ဗိဒါယ ၀ိရောဂါယနိရောဓာယ ဓမ္မံဒေသေတိ၊ ဓမ္မကထိကော ဘိက္ခူထိ အလံဝစာနာယ
ဘိက္ခု = ရဟန်း၊ ဓမ္မကထိကောတိ - အဲဒီနားကို နိုးအောင် ဝေဒနာကြီးနဲ့ တစ်ခါတည်း ကင်းခင်တဲ့ ဥာဏ်ပေါ်အောင် ဝေဒနာတို့ကို တကယ်တန်း ချုပ်ချင်တဲ့ သဘောမျိုးဝေဒနာနဲ့ကို ဘယ်တော့မှ မနေချင်တဲ့ သဘောမျိုး ( တင်ပါ့ ) အဲဒီကဲ့သို့ ရောက်အောင် ဟောနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ ဓမ္မမထိကဆိုတဲ့ ဥစ္စာဆိုခြင်းငှာ ထိုက်ပါတယ်ကွာတဲ့ ( မှန်ပါ့ ) ဒီလိုဟောနိုင်လို့ရှိရင်တော့ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဓမ္မံဒေသေတိ ဓမ္မကထိကော ဘိက္ခူတိ အလံဝစာနာယ ။
ဘုရားကကိုယ်တော်တိုင်ဟောပြန်တယ် ၊ အားလုံး ဒကာ ဒကာမတို့ တရားနာတဲ့အခါမှာ ရှေ့ သတိ ထားရလိမ့်မယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) တရားနာတဲ့အခါမှာ ရှေ့ ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အချိုးအစားရှိတာကို ဒို့တရား နာရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည် ဘုရားက အခု အစီအစဉ်ပေးနေပြီ ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဥပမာ ဝေဒနာဟောနေတဲ့ဆရာဆိုလို့ ရှိရင်လည်း ဝေဒနာကို ငြီးငွေ့လာအောင် ဟောနိုင်တဲ့ဓမ္မက ထိက ( တင်ပါ့ ) ဝေဒနာပေါ်၌ ဒကာ ဒကာမတွေ မှတ်ရိုးမှတ်တမ်းနဲ့ကို တစ်ခါတည်း နည်းနည်းမှ ဒီဝေဒနာ က္ခန္ဓာကြီးကို မရချင်တော့ပါဘူဆိုတဲ့ ဥာဏ်ပေါ်အောင် ဟောနိုင်တဲ့ ဓမ္မကထိက ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
ဝေဒနာချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့် တပည့်တော်တို့ အလွန်ဆုံးကြိုက်မှာပဲဆိုတဲ့ ဥာဏ်ပေါ်အောင် ဟောနိုင် တဲ့ ဓမ္မကထိကမှသာလျှင် ဓမ္မကထိကလို့ ငါဘုရားကဆိုခြင်းငှာ ထိုက်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသကွာတဲ့ (မှန်ပါ ) ၁ ။ နံပါတ် ၁ ။ နံပါတ် ( မှန်ပါ ) ။
ဒါဖြင့် တရားနာလာကြတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ ရုပ်ဟောနေတဲ့ ဆရာတွေ့လို့ရှိရင် ရုပ်ပေါ်မှာ ငြီးငွေ့ မှု ၊ ကန့်ကွက်မှု ၊ ရုပ်ချုပ်တာကို သဘောကျမှု ၊ ဤကဲ့သို့ ခင်ဗျားတို့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို တရားနာရ လိမ့်မယ်။
တရားနာမှုသည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင် ဒကာစိန်ရေ ငြီးရအောင်လို့ နာရလိမ့်မယ်၊တဏှာပွားပြီး သကာလ ဟုတ်လား၊ တဏှာတွေပွားပြီးသကာလ ဘုံဘ၀တွေတောင့်တကြောင့်ကြပြီးနေတဲ့ ဥစ္စာက တဏှာပွားတာ ( မှန်ပါ့ ) ။
ငြီးငွေ့တာပါရဲ့ လား၊ စွန့်လွှတ်ချင်တာပါရဲ့ လား ( မပါပါဘူးဘုရား ) အေး ခန္ဓာငါးပါးချုပ်ခြင်းကို သဘောကျပါရဲ့ လား ( မပါပါဘူးဘုရား ) ၊ အဲဒါမျိုးကို ငါဘုရားက ဒီလိုဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဓမ္မကထိကလို့ ငါကမဆိုဘူးကွတဲ့ ( မှန်ပါ့ ) မဆိုသေးဘူးတဲ့၊ မဆိုသေးဘူးတဲ့ ( မှန်ပါ့ )။
အဲဒီတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ တရားဟောနာတဲ့အခါမှာလည်း ရွှေးရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ပါလာတယ် ( ပါလာပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒီလိုပြောကြစို့ဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ရှေးဦးစွာ ရွံမုန်းအောင်ဟောတတ်တဲ့ဆရာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ကို စွန့်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဟောတတ်တဲ့တရား ဟောဆရာ ( မှန်ပါ ) ။
ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့် သေသေချာချာကောင်းမှာပဲဆိုပြီး သကာလ စိတ်ထဲမှရောက် လာအောင် ဟောနိုင်တဲ့ ဓမ္မကထိကမျိုးမှာသာလျှင် ငါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဓမ္မကထိကလို့ ငါဆိုလိုက်တယ်ကွာ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ယခုဘုန်းကြီးသည်ကားလို့ဆိုရင် ဝေဒနာအကြောင်းချည်းသာဟောနေ လိုက်တာ တစ်လခွဲ၊ နှစ်လလောက်ရှိနေပြီ၊ ဘုရးဟောတော်မူတာတွေနဲ့လည်း ကိုကတယ် ၊ ( မှန်ပါ့ဘုရား )
ဝေဒနာယစေ ဘိက္ခု နိဗ္ဗိဒါယ ၀ိရာဂါယ နိရောဓါယ ဓမ္မံ ဒေသေတိ ဓမ္မကထိကော ဘိက္ခူတိ အလံ ၀စနာယ၊
ဝေဒနာယ - ဝေဒနာကို နိဗ္ဗိန္ဒာယ - ငြီးငွေ့ခြင်းငှာ၊ နိဗ္ဗိန္ဒဥာဏ်လာအောင်ပေါ့ဗျာ၊ ၀ိရာဂါယ ဝေဒနာ ပေါ်၌ နှစ်သက်ခြင်းကင်းခြင်းငှာ၊ နိရောဓာထ ဝေဒနာချုပ် ပျောက်ခြင်းငှာ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပေါ့ဗျာ၊ ဓမ္မံ - တရားကို။ ဒေသာတိ - ဟော၏ ဣတိ- ထို့ကြောင့် ဓမ္မကထိကောတိ ၊ ဣတိ - ထို့ကြောင့် ဓမ္မကထိကောတိ ဓမ္မကထိကမည်၏ ။ ဣတိ - ဤသို့၊ ၀စာနယ ဓမ္မကထိကဟုဆိုခြင်းငှာ ၊ အလံ - ထိုက်၏ ။
တစ်ခါတည်း ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင် ဓမ္မကထိကဆိုတာပြောဆိုဖို့ ထိုက်သဟေ့လို့ ဘုရားကဟော လာပြန်တယ်… ( မှန်ပါ့ ) အလံဝစနာယကို ၀စနာယဆိုခြင်းငှာ အလံ - ထိုက်ပါတယ်တဲ့ ၊ အခုန ပြောခဲ့တဲ့ အင်္ဂါတွေနဲ့ညီအောင် ဟောနိုင်လို့ ရှိရင်ဖြင့် ဓမ္မကထိက၏ အဓိပ္ပါယ်ဟာ သေသေချာချာသက်ရောက်ပါတယ် ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ခင်ဗျားတို့တရားနာလို့ရှိရင်ဖြင့် တရားဟောဆရာတွေ ၊ တရားဟောဆရာတော သမားတော်တွေ ဟောကြလိမ့်မယ်နော်။
ခင်ဗျားတို့က ငြီးငွေ့သည်တိုင်အောင် စွန့်လွှတ်ချင်သည့်တိုင်အောင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ ရှိရင်ဖြင့် အင်မတန်မှ ဆန္ဒပြင်းပြပြီး သကာလ လာသည့်တိုင်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဓမ္မကထိကဆိုခြင်းငှာထိုက်လေသောကြောင့် ခင်ဗျားတို့ ကြပ်ကြပ်နာပါ ( မှန်ပါ့ ဘုရား )။
ကြပ်ကြပ်နာရမယ်တဲ့ ၊ အဲဒီလိုပဲ တရားနာနည်းကျ၊ ကနေ့တော့ ဒကာ ဒကာမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားစရာက ဝေဒနာပေါ်၌ ငြီးငွေ့ခြင်းငှာ ဝေဒနာကို စွန့်လွှတ်ခြင်းငှာ ဝေဒနာလုံးဝချုပ်ခြင်းငှာ၊ ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဓမ္မကထိကလို့ဆိုခြင်းငှာ ထိုက်တယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ကလည်း မှတ်ဦး ( မှတ်ပါမယ်ဘုရား )။
ဒါဖြင့် ဒကာစိန်ရေ - ဘုန်းကြီးတို့ ဝေဒနာကို ဒကာ ဒကာမတွေကို ဟောနေတဲ့ အခါကျတော့ သုခဝေဒနာကလည်း ဒုက္ခသစ္စာမို့ ခင်ဗျားတို့ သုခဝေဒနာနဲ့လည်းနေချင်သေးရဲ့ လား … ( မနေချင်ပါဘူး ဘုရား ) ဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပျက်ဆုံး ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လေသောကြောင့် ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကော နေချင်သေး ရဲ့ လား … ( မနေချင်ပါဘူး ဘုရား ) ။ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပျက်ဆုံး ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လေသော ကြောင့်လည်း နေချင်သေးရဲ့ လား … ( မနေချင်ပါဘူး ဘုရား ) ။
အေး - အဲဒီလို ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာလည်း ငြီးငွေ့လာရမယ် ( မှန်ပါ ) ဟုတ်လား …။
၀ိရောဂါယတဲ့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီဝေဒနာကြီးဖြစ်ပျက် ဒုက္ခသစ္စာကြီး မှန်နေတော့ခင်ဗျားတို့ နာရင် လည်းစွန့်ချင်မှာပဲ ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဥာဏ်နဲ့အားထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ဝေဒနာပဲ၊ ဝေဒနာပဲ၊ ဒုက္ခသစ္စာ ခေါ်တဲ့တရားကြီးပါပဲ။ အမြဲတမ်းရှိနေသောကြောင့် ခင်ဗျားတို့ မစွန့်ပစ်ချင်ပေဘူးလား … ( စွန့်ပစ် ချင်ပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲဒီစောင့်နေတဲ့ ဥာဏ်လာတာဟာလည်း ဓမ္မကထိကကောင်းလို့ အဲဒါလာတာ၊ ဝေဒနာက္ခန္ဓာကြီး၊ ဝေဒနာတွေ အကုန် ဇာတ်သိမ်းသွားမယ်၊ ချုပ်ပျောက်သွားမယ်ဆို ၊ အားလုံး ဒကာ ဒကာမတွေ မကြိုက်ဘူး လား… ( ကြိုက်ပါတယ်ဘုရား ) ။
အေး - အဲဒီလို ခင်ဗျားတို့ စိတ်ထဲမှာပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့ ခင်ဗျားသန္တာန်မှာ ခင်ဗျားတို့ ဆိုဆုံးမနေတဲ့ ဆရာဖြစ်စေ ၊ ဟုတ်လား - ဓမ္မကထိကဆိုခြင်းငှာ ထိုက်သည် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ခင်ဗျားတို့ စိတ်ထဲမှာ ဥာဏ်ထဲမှာ သုံးမျိုးပေါ်ပြီဗျ၊ ၁။ ငြီးငွေ့တယ် ၊ ၂။ စွန့်လွတ်ချင်တယ်၊ ၃။ ဝေဒနာ အကုန်ချုပ်ရင်ကြိုက်တယ် ၊ ( မှန်ပါ့ဘုရား )။
ဝေဒနာတွေနဲ့အညီ ခင်ဗျားတို့ သန္တာန်ပေါ်တဲ့ ဆရာတော် သမားတော်ဆိုရင်ဖြင့် ကြိုးစားပြီးနာကြပါ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ကြိုးစားပြီးနာကြပါ။
ကဲ - ဒါဖြင့် ဒကာစိန်ရေ ဓမ္မကထိကအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပြီလား… ( သိရပါပြီဘုရား ) ၊ (၁) ငြီးငွေ့အောင်ဟောနိုင်မှတဲ့နော် ၊( ၂ ) စွန့်လွတ်ချင်အောင်ဟောနိုင်မှတဲ့ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ၊ ( ၃) ဝေဒနာတို့ ၏ ချုပ်ရာဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလည်း အရောက် လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ စိတ်နှစ်သက်အောင် ဟောနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှ ဓမ္မကထိကတဲ့ ( မှန်လှပါဘုရား ၊ တပည့်တော် အသက်( ၇၀ ) ရှိပါပြီ၊ ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးပဲ ဤကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ တကွ ဟောတာတွေ့ရပါတယ်ဘုရား ) ။
ကိုင်း - ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမ တို့ ၁ - နံပါတ်အကြောင်းကတော့ဖြင့် တရားဟောဘုန်းကြီး ရွှေးတာပဲရှိသေးတယ်၊ ၂- နံပါတ်အကြောင်းကဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ အလှည့်ရောက်လာတယ်၊ အရေးကြီးတယ် မှတ်စမ်းပါ၊ ၂ - နံပါတ်အကြောင်းကလည်းအရေးကြီးလို့ ပြောရပါတယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
( ၂ )ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
ဒီနှစ်နံပါတ်အကြောင်းက ဘာတုံးလို့ မေးတဲ့ အခါကျတော့ကိုတဲ့ ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ ဘုရားလို့ အခုနရဟန်းက ဒုတိယ ၂ - နံပါတ်နဲ့မေးပြန်တယ် ( တင်ပါ့ )။
ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားအတိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားလို့ မေးတဲ့အခါ ကျတော့ ဘုရားကဖြေရှာပါတယ်။
ဝေဒနာယ၊ စေဘိက္ခု နိဗ္ဗိဒါယ၊ ၀ိရာဂါယ နိရောဓါယ၊ ပဋိပ္ပန္နောဟောတိ ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပ္ပန္နော ဘိက္ခူ တိ အလံဝစာနာယ၊
ဒါ ခင်ဗျားတို့ အလှည့်ရောက်လာတယ်၊ ဝေဒနာကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှာ။ ငြီးငွေ့အောင်ပေါ့ဗျာ ကျင့်ရမယ် (မှန်ပါ့ )ဝေဒနာကို စွန့်လွတ်ချင်အောင် ခင်ဗျားတို့ကျင့်ရမယ် ။
ဝေဒနာချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့် အင်း … အနာအကုန်ပျောက်သောကြောင့် ချမ်းသာတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုတ်တယ်၊ ဝေဒနာချုပ်ရာသာကြိုက်တော့တယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ဒီအတိုင်းပေါ်တဲ့ ဥာဏ်နဲ့ ကျင့် မယ်ဆိုလို့ ရှိရင်ဖြင့် အဲဒါ ဓမ္မနုဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည် ( မှန်လှပါဘုရား ) ဟုတ်ပလား ( ဟုတ်ပါပြီ ဘုရား) ။
အဲဒီတော့ ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ ဒကာ ဒကာမတွေအားထုတ်မှလာတယ်၊ ဒီအတိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ပုတီးစိပ်လို့မရဘူး ( တင်ပါ့ဘုရား ) ယောက်ျားလေးလိုချင်လို့ ယောက်ျား လေးဆုတောင်းပြီး ဥပုဒ်တွေ စောင့်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး၊ မိန်းကလေးဆုတောင်းလို့ မိန်းကလေးအဖြစ်ရ အောင်လို့ မိမိတို့ဝမ်းထဲရောက်အောင် ဆုတောင်းပြီးမွေးလို့ ဒီအရမျိုးမဟုတ်ဘူး ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
သေသေချာချာကို ဒကာ ဒကာမတို့ ဝေဒနာ ခင်ဗျားတို့ ဖြစ်တာလေးရှေးဦးစွာ ဝေဒနာဆိုတာ နာမ်ဓမ္မပါလားလို့ ရှေးဦးစွာ သိရှိရင် နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒဥာဏ်ကို အသိရှိ ၊ ဒီကစရလိမ့်မယ် ဒကာ ဒကာမတို့ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဝေဒနာဘယ်နှစ်မျိုးရှိသတုံး၊ (သုံးမျိုးရှိပါတယ်ဘုရား ) အဲဒီတော့ ဝေဒနာသုံးပါးရှိနေတာ ဒကာ ဒကာမတွေက အင်း ၊ သုခဝေဒနာ၊ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ ဥပက္ခာဝေဒနာ၊ ဝေဒနာသုံးမျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာ သိတော့ ယောက်ျားတွေ၊ မိန်းမတွေရှိသေးရဲ့ လား ( မရှိပါဘူး ) ။
အဲဒီတော့ ဝေဒနာဘယ်နှစ်မျိုးရှိ ( သုံးမျိုးရှိပါတယ် ဘုရား ) အခေါ်အဝေါ်ကော အထင်သာရှိ ( မှန်ပါ့ ) တကယ်ရှိတာက ဝေဒနာသုံးမျိုးသာရှိတယ်၊ အဲဒါကြောင့် အဲ … ဒီကစပြီး သကာလ ကျင့်ရမယ်၊ ( တင့်ပါ ) နာမပရိစ္ဆေဒဥာဏ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဝေဒနာဟာ နာမ်ပဲဗျ ။
အဲဒီတော့ ဝေဒနာဟာ နာမ်ဖြစ်ပြီး သကာလနေသောကြောင့် ဝေဒနာဟာ နာမ်မှန်းသိကြပလား ( သိပါပြီဘုရား ) ။
ကောင်းပြီ ဒါဖြင့် စောစောသိနိုင်တဲ့ အသိစိတ်ရှိသေးတယ်၊ ဝေဒနာသည်ကားဆိုလို့ရှိရင် ဝေဒနာမှန်းသိ၊ ဝေဒနာမှန်းသိတဲ့အတွက် ငါဟာ ကောင်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့ ဒိဋ္ဌိတွေမလာတော့ပါဘူး၊ ငါဖျားနေတယ်ဆိုတဲ့ ဒိဋ္ဌိတွေကော မလာတော့ပါဘူး ( မလာတော့ပါဘုရား ) ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာသာရှိတော့ တယ် ။
ဒါတော့ ငါလစ်လျူရှုနေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဥပေက္ခာဝေဒနာကို ငါစွဲ၊ စွဲတာကောရှိသေရဲ့ လား… မရှိ တော့ပါဘူး၊ ဝေဒနာ ဝေဒနာ မှန်းသိပြီ ၊ ဝေဒနာဟာ နာမ်လို့သိပြီ ( သိပါပြီ ဘုရား )။
အဲဒီလိုသိတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေကျတော့ အင်း… ( ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ ဒိဋ္ဌိက - ဒိဋ္ဌိ၊ ၀ိသုဒ္ဓိ က စင်ကြယ်သော ကြောင့်၊ ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေတဲ့ ( တင်ပါ့ဘုရား ) အဲဒီက စကျင့်ရမှာ ( မှန်ပါ့ ) သို့သော် ဒကာ ဒကာမတွေက ရှိပြီးသားပါ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဒီစာနဲ့ တိုက်ဆိုင်လာလို့သာ ဒီကစပြောနေရတာပါ၊ တကယ်ကျင့်လာတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေကျ တော့ ၊ ဝေဒနာဟာ အလိုလိုပေါ်လာသလား ၊ ထိခိုက်မှုကြောင့် ပေါ်သလား … ( ထိခိုက်မှုကြောင့် ပေါ်ပါတယ် ဘုရား ) ။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ သန္တာန်မှာဖြစ်တဲ့ သုခဝေဒနာဟာလည်း ဖဿကြောင့်ပေါ်လာတာ၊ ဒုက္ခဝေဒနာ ကြည့်လိုက်လဲ ဖဿကြောင့် ပေါ်၏ ၊ ဥပေက္ခာကြည့်လိုက်လဲ ဖဿကြောင့်ပေါ်၏ ။
ဝေဒနာဟာမိုးပေါ်က အလိုလိုပေါ်ပေါက်လား၊ (မဟုတ်ပါဘူးဘုရား ) ဖဿကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ် ဘူးလား၊ အဲဒီတော့ ဖဿ ပစ္စယာဝေဒနာ ဝေဒနာဆိုတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် ပါဠိတော်ကြီးကိုလည်း၊ ဖဿကအ ကြောင်း ဝေဒနာက အကျိုးပါလားလို့ ၊ အကြောင်းအကျိုးဆိုတာမသိသေးဘူးလား… ( သိပါတယ် ဘုရား ) ။
အဲဒီတော့ ဒကာ ဒကာမတွေမှာဝေဒနာတွေရှုပြီးသကာလနေတာ သည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် အ ကြောင်းအကျိုးတွေရ၍နေတာပဲဆိုတော့ အကျိုးဝေဒနာက္ခန္ဓာကြီး ရှုနေတာပဲ ဆိုရင်ကော လွဲပါ့မလား ( မလွဲပါဘုရား ) ။
ဖဿကအကျိုးပေးလိုက်တော့ အကျိုးဝေဒနာက္ခန္ဓာကြီးကတော်ကြာသုခပေါ်၊ တော်ကြာဒုက္ခပေါ်၊ တော်ကြာဥပေက္ခာပေါ်၊ အကျိုးဝေဒနာက္ခန္ဓာကြီးကပေါ်မနေဘူးလား၊ (ပေါ်နေပါတယ်ဘုရား ) ။
အင်း… အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အကျိုးတွေပဲ ရှိတယ်ဆိုတော့ သင်္ခါရုပက္ခာယ၀ိသုဒ္ဓိဆိုတော့ ၀ိစိ ကိစ္ဆာစင်ကြယ်တဲ့ ၀ိသုဒ္ဓိသွားဖြစ်တယ်၊ (မှန်ပါ့ ) ဒါက သူ့မူ ( တင်ပါ့ ) ရှင်းလိုက်ကြပါတော့ ၊ ဒကာ ဒကာမတို့ ။
ရှင်းလိုက်ကြပါတော့ ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ ဘယ်ကနေရှင်ရမှာတုံးဆိုလို့ရှိရင် - သုခဝေဒနာလေးပေါ် လာတယ် ဒကာ ဒကာမတို့ ဥဒယဗ္ဗယဆိုတဲ့ ဖြစ်မှုက နှိပ်စက်လိုက်၊ ပျက်မှုကနှိပ်စက်လိုက်၊ ဟုတ်လား … ( မှန်ပါ့ ) ။
အဲဒီဖြစ်မှု ပျက်မှုက နှိပ်စက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဝေဒနာကလေးဟာ ဝေဒနာအဖြစ်နဲတည်နိုင် တန့်နိုင်သေးရဲ့ လား ( မတည်နိုင် မတန့်နိုင်တော့ပါဘုရား ) မတည်နိုင်မတည့်နိုင်ဘူးဆိုတာကြီးဟာ၊ ဖြစ်ပျက်နှိပ်စက်သွားလို့ မထူနိုင် မထနိုင်ဘူးလို့ ၊ ဥာဏ်ကလေးက နောက်ကနေ ရှုပေးရမယ် ( မှန်ပါ့ ) ။
ဝေဒနာလေးဖြစ်ပျက်သွားတာ ဥဒယဗ္ဗဒါန်ချကနဲ့ဟုတ်ပလား၊ အသက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာ ဘုန်း ကြီး ခဏခဏမပြောဘူးလား ( ပြောပါတယ်ဘုရား ) ၊အဲဒီကစပြီး ရှင်းရမယ် ။
အဲဒီကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်တွေမြင်ပါများလာပြီဆိုမှဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ မရွံပါနဲ့၊ မမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ဖြစ်ပျက်ချည်းမြင်နေရတဲ့ဥစ္စာကြီး ဒကာစိန်ရေ အိမ်ဆောက်လိုက်၊ မီးလောင်လိုက်ဆိုတော့ ဒကာစိန်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအိမ်ဆောက်ရင် ဒီမီးလောင်မယ်ဆိုတာသိတော့ ဒါလည်း မဆောက်ချင်ပါဘူး၊ ဒကာစိန်ရာ ကြည့်ကော ကြည့်ချင်သေးရဲ့ လား ( မကြည့်ချင်ပါဘူးဘုရား )။
မင်းတို့ ဆောက်မီးလောင်မှာပါ၊ ငါလည်း ဂရုမစိုက်ချင်ပါဘူးကွာ ဆိုတော့ ငြီးငွေ့မလာဘူးလား၊ ( ငြီးငွေ့လာမှာပါဘုရား ) အဲဒိကဲ့သို့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီဆိုမှဖြင့် ငြီးငွေ့လာအောင် ခင်ဗျားတို့ ကျင့်ရမယ် … ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
ဒါမှ ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် ( တင်ပါ့ဘုရား ) ဒါဖြင့် ငြီးငွေ့ အောင်ကျင့်ကြပါဆိုတဲ့စကား သည်၊ ဘုရား ဟောတော်မူတာသည်၊ သံယုတ်ပါဠိတော်မှာ ဓမ္မကထိက ၀ဂ်သံယုတ်ပါဠိတော်မှာ ဤအတိုင်း လာတယ် ။
အဲဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဝေဒနာသုံးခုက ၊ တစ်ခုတည်းနေတယ် ( မှန်ပါ့ ) ကိုင်း ရှေ့ ပိုင်းက ဘာကိုရှုရမှာလဲ မေးတော့ ဖြစ်ပျက်မြင်ရုံနဲ့မပြီးဘူး၊ ဝေဒနာကို ငြီးငွေ့သည့်တိုင်အောင် ရှုဖို့ အရေးကလိုသေး တယ်၊ ( တင်ပါ့ ) ရှင်းပလား ( ရှင်းပါပြီ ) ။
ဒါဖြင့် ၁ - နံပါတ် ဖြစ်ပျက်မြင်အောင်ရှု ( မှန်လှပါဘုရား ) ဖြစ်ပျက်မြင်အောင် ရှုပါများလာတော့၊ ဒကာစိန်တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒကာ ဦးလှဘူးတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ ၊ မငြီးငွေ့ပါနဲ့ဆိုလို့ ၊ တားလို့ပြုလို့ရသေးရဲ့  လား ( မရပါဘုရား ) ။
အေး ငြီးငွေ့လာမှာပဲ ( မှန်ပါ့ ) ငြီးငွေ့သည့်တိုင်အောင် ကျင့်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှ ဓမ္မာနဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တယ်၊ ဆိုတော့ ကျင့်စဉ်လည်းပြောခဲ့တယ်နော်၊ ကျင့်စဉ်တရားကလိုပြန်တယ်၊ ( မှန်လှပါဘုရား )။
အေး ဘုန်းကြီးများ ဒကာ ဒကာမတို့ ဖြစ်ပျက်မြင်ရုံနဲ့ မရပ်လိုက်ပါနဲ့ ၊ ဘယ်ကအောင်ခင်ဗျားတို့ ရှုရမှာလဲ၊ ( ငြီးငွေ့လာသည့်တိုင်ပါ ဘုရား ) အေး …။
ဝေဒနာချုပ်သည့်တိုင်အောင် ဒကာစိန်ရေ ငြီးငွေ့ရွံ့ မုန်းလာသည့်တိုင်အောင်ပေါ့ဗျာ ( တင်ပါ့ ) အဲဒီကျအောင် ရှုပေးလိုက်စမ်းပါ ( မှန်ပါ့ ) ။
အဲဒါမှ တရားအားလျှော်စွာကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ လောကုတ္တရာတရားနဲ့ လျှော်အောင်ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထဲပါဝင်သွားပြီ၊ ( မှန်လှပါ ) ဓမ္မာနုဓမ္မ ပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီ ။
ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလားလို့ မေးတဲ့အခါကျတော့ အဲဒါတွေပဲကွတဲ့ နိဗ္ဗိဒါယ -ငြီးငွေ့ခြင်းမှာသာဖြစ်သေး ရဲ့ ၊ ဝေဒနာယ ဝေဒနာကုန်လို့ - ငြီးငွေ့ခြင်းငှာ၊ ၀ိရာဂါယ ကျအောင်ဆက်လက်ပြီး ကျင့် ။
၎င်း ဝေဒနာသည်၊ ဖြစ်ပျက်ပြီးရင်၊ ငြီးငွေ့ပြီးရုံနဲ့ မရပ်ပါနဲ့အုံး၊ တစ်ခါတည်း ဒီဝေဒနာကြီးကို စွန့်ချင် တဲ့မဂ်ဥာဏ်ပေါ်လာအောင် ရှုပေးတဲ့ ၊ ဒကာ ဒကာမတို့ ဘယ်အချေအနေရှုရမှာတုံး၊ (မဂ်ဥာဏ်ပေါ်လာ အောင် ရှုရမှပါဘုရား ) ။
စွန့်ချင်တဲ့မဂ်ဥာဏ်ပေါ်လာအောင် မင်းတို့သည် ရှုပေးလို့ရှိရင်တဲ့ ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီကွ တဲ့ ( မှန်ပါ့ ) အင်မတန် အဖိုးတန်သွားပြီနော် ။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ ဓမ္မ ပဋိပတ္တိ၊ ပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသည်၊ ဒကာစိန်ရေ အလုပ်နဲ့ ပေါ်တာနော်၊ ဆုတောင်းနဲ့ ပေါ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒကာစိန်သဘောကျပလား ( ကျပါပြီ ဘုရား ) ။
ဣမာယဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိ ပတ္တိယာနဲ့၊ မဆိုင်သေးဘူး၊ ( မဆိုင်သေးပါဘုရား ) မဆိုင်သေးဘူး၊ မဆိုင်သေးဘူး၊ ဒါအလုပ်နဲ့ပေါ်ရမယ် ( မှန်ပါ့ ) ။
ကိုင်း ယခု ဒုတိယရလိုက်တာက ဘာပြောသလဲလို့ မေးလို့ရှိရင်ဖြင့် ကြပ်ကြပ်ရှုပေးပါ၊ ဒီဝေဒနာကြီးကို စွန့်ပစ်ချင်တဲ့ ဥာဏ်ပေါ်သည့်တိုင်အောင် ရှုပေးလိုက်ပါလို့ ဘုန်းကြီးကမပြောဘူးလား ( ပြောပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲဒါ ဘုရားဟောလို့ပြောရဲတာ ( မှန်ပါ့ ) ၀ိရာဂါယ - ကို ၀ိရာဂါယ - ဝေဒနာပေါ်၌ စွန့်ချင်တဲ့ ဥာဏ်ပေါ်သည့်တိုင်အောင် ပေါ့ဗျာ၊ အဲဒိကဲ့သို့ စွန့်ပစ်ချင်တဲ့ ဥာဏ်ပေါ်သည့်တိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေ ရှုပေးတော့၊ လောကုတ္တရာ တရားလျှော်သော လောကုတ္တရာတရားကို လျှော်အောင်စွန့်နေတဲ့ ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ် သေသေချာချာဖြစ်ပြီဟေ့လို့ ဘုရားက တာဝန်ခံတယ်၊ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပန္နော ဘိက္ခူတိ အလံဝစာနာယ - ဘိက္ခူ - ရဟန်း ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပန္နောဣတိ တရားအတိုင်း၊ လောကုတ္တရာ တရားအားလျှော်သော ၊ လျှော်သောအကျင့်ကို ကျင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ ၀စနာယ - ဆိုခြင်းငှာ အလံ - ထိုက်သွားပြီဟေ့ သူနိဗ္ဗာန်လျှော်အောင် ကျင့်ပြီဟတဲ့ ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
နိဗ္ဗာန်နဲ့လျှော်တဲ့ အကျင့်ကျင့်ပြီတဲ့ ( မှန်ပါ့ ) ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ ဆက်ပါဦးတဲ့ကွာတဲ့ ဒါကတော့ ကျင့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒကာ ဒကာမတို့ ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသတုံးဆိုတော့ ၀ိရာဂါယ - ဆိုတော့ မဂ်ရနေပြီ ၊ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
မဂ်ရနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် တဲ့ ဘုရားက နိရောဓာရ ဒီမဂ်ကလေး သောတာပတ္တိ မဂ်ရရုံနဲ့ ရပ်မနေနဲ့ဦး ။
ဒါ - မဂ်ကလေးရရုံနဲ့ ဖိုလ်ကလေးဆိုက်ရုံနဲ့ ရပ်မနေနဲ့ ရပ်မနေနဲ့ အုံး၊ တစ်ခါတည်းဝေဒနာနဲ့ အဆက်ပြတ်သည့် တိုင်အောင်၊ ဝေဒနာကြောင်းကို ချုပ်မှ နေရာကျမှာ တိုင်အောင် ကျင့်လိုက်စမ်းကွာ ။
ဒီလိုနဲ့ ဝေဒနာက္ခန္ဓာကြီးကိုပင်လျှင် အကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ကျင့်လိုက်ကွာ ၊ သောတပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်နဲ့ တင်းတိမ်မနေနဲ့အုံးကွာ၊ ဟုတ်လား ၊ ဝေဒနာကို ချုပ်ပျောက်သွားသည့် တိုင်အောင် နေရာကျအောင် ပေါ့၊ မင်းတို့သည်ကားလို့ဆို့ရင် ကြိုးစားလိုက်ပါဦး ဆိုတာကတော့ ဒကာ ဒကာမ တွေ ဒီ ဥစ္စာက ၊ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်က နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့ ပြောတာပါ ။
ပြောတာပါ ဒီဥစ္စာကတော့ အထူးကျင့်စရာမလိုတော့ပါဘူး မလိုတော့ပါဘူးတဲ့ သို့သော် သောတပန်သက ဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ကတော့ ရမယ် ။
အဲဒီတော့ ဝေဒနာတွေနဲ့ ၊ သောတာပန် သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဆိုတော့၊ ဝေဒနာတွေက ရှိနေဦးမှာပေါ့၊ ဝေဒနာတွေရှိရင် ဝေဒနာတွေက ဒကာ ဒကာမ တွေ နှိပ်စက်နေဦးမှာပဲ ၊ ဟုတ်ဖူးလား ။
အေးဒါကြောင့် သောတာပန်တို့လည်း ဓမ္မဖြစ်ပျက်တွေက ညှာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ သကဒါဂါမ်တို့ကော ( ညှာမှာမဟုတ်ပါဘုရား ) ဘယ်ညှာမလဲဗျာ၊ ရှင်မောဂ္ဂလန်ကြီး ခိုးသားတွေ ရိုက်လိုက်တာ ညှာသေးသလား ( မညှာပါဘုရား ) ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဗျာ ။
ရှင်သာရိ ပုတ္တရာကြီးတော့ ၊ သွေးဝေဒနာကြီးနဲ့ဗျာ၊ အဲဒီတုန်းကအစ ညှာသေးသလား ( မညှာပါ ဘုရား ) အဲဒီတော့ ဒီခန္ဓာကြီးမရှိမှာပဲ ဝေဒနာလုံးဝ ချုပ်မှာပဲ၊ ဝေဒနာက္ခန္ဓာကြီးလုံးဝ ချုပ်သည်တိုင်အောင်ပဲ ကျင့်လိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ ( မှန်လှပါဘုရား )။
အဲဒီကဲ့သို့ ကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မှ ဘုရားကပါဋ္ဌိနဲ့ ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့-
ဝေဒနာယ စေဘိက္ခု နိဗ္ဗိဒါယ ၀ိရာဂါယ နိရောဓါယ ပဋိပန္နော ဟောတိ ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္နော ဘိက္ခူတိ အလံဝစာနာယ - ဒီလိုဟောလိုက်တယ် ။
ဝေဒနာယ ဝေဒနာကို နိဗ္ဗိန္နာယ - ငြီးငွေ့အောင်ရှုနော်၊ ဝေဒနာပေါ်တဲ့ဆီ ဘယ်တော့မှ တဏှာမလာ အောင် ကျင့်လိုက်၊ အဲဒီဆီ လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာကလာဦးမှာကိုး ။
လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာ သွားဆုတောင်းတော့ လူ့ဒုက္ခ၊ နတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ ဝေဒနာက္ခန္ဓာကြီးက မရဘူးလား၊ အေး ဝေဒနာက္ခန္ဓာ ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရမှာစိုးတယ် ဘုရားက ၊ မှန်ပါ့ ။
ဒါကြောင့် ဝေဒနာယ - ဝေဒနာကို ၀ိရာဂါယ - နည်းနည်းမှ မလိုချင်တပ်ခြင်းကင်းခြင်းငှာ ၊ ဒီလိုလည်းကျင့်ပေးကြပါတဲ့ ၊ မဂ်ပေါ်နေအောင် ကျင့်ပေါ့ဗျာ၊ ( မှန်ပါ့ ) နိရောဓါယတဲ့ဝေဒနာလုံးလုံးချုပ်မှသာ လျှင်နေရာကျမှာပဲ ကျအောင်တော့ ကျင့်လိုက်စမ်းပါ ။
အဲဒီလိုကျင့်လို့ မဂ်စစ်ပေါ်မှ ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါက ဆိုနိုင်ပါတယ်ကွတဲ့ ၊ ရှင်းပလား - ( ရှင်းပါပြီ ) ။
အေး - ဓမ္မနုဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေလိုတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်စဉ် ၊ ( မှန်လှပါဘုရား ) ဓမ္မာနုဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင် ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ ဆိုလို့ရှိရင် ဝေဒနာကို ငြီးငွေ့သည့်တိုင်အောင် ရှုပါ၊ ( မှန်ပါ ) ဝေဒနာကို စွန့်ချင်သည့်တိုင်အောင်ရှု ၊ ဝေဒနာကို ဆုံးအောင်မြင့်သည့် တိုင်အောင်ရှု ၊ ဝေဒနာကို အကုန်ချုပ်ရင် ကောင်းလေစွ ဆိုတာ ပေါ်သည့်တိုင် အောင်ရှုပေး ။
အဲဒီကဲ့သို့ ရှုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ ဓမ္မနုဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့ ဘုရားကဆိုလိုက်ပြီ ၊ ( မှန်ပါ့ ) ဆိုတာပေါ့ဗျာ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ် တစ်ခါတည်း ၊ သောတပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ကျအောင်ပဲ၊ ရောက်သွားပြီ လို့ပြောတာ၊ ရိပ်မိပလား ( ရိပ်မိပါပြီ ဘုရား )။
အဲဒါကြောင့် အဋ္ဌကထာဆရာက ၂ - နံပါတ်ဆိုတာတဲ့သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တဲ့ သေမ္ခဆိုတာ သောတာပန် သကဒါဂါမ် အနာဂါမ်ကိုဆိုတာ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
အဲဒီတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ အဲဒီကျအောင် ကျင့်ရင်ဖြင့် ခင်ဗျားတို့ သောတာပန် သကဒါဂါမ် အနာဂါမ်ကျအောင် သေသေချာချာဖြစ်မယ် ( မှန်ပါ့ ) ။
ငြီးငွေ့အောင်ရှု၊ စွန့်တဲ့စိတ်လာအောင် ရှုပေး၊ ရှုရှုပေး ၊ ဟုတ်လား အဲဒီကဲ့သို့ ဒီနှစ်ချက်အောင်လို့ရှိ ရင် သေက္ခပုဂ္ဂိုလ် အတွက် ။
အဲဒီတော့ ကျုပ်တို့သည် ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ အထဲသို့ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့သည် ရောက်ပါပြီ၊ အဲဒါ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ် ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ၊ ဓမ္မာနုဓနမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ် ( မှန်ပါ့ ) ။
ဘုရားဟော ဓမ္မနု ဓမ္မပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ မသိဘဲနေမှာစိုးလို့ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဖြစ်သွားပြီပြောတာကွတဲ့ အဋ္ဌကထာဆရာကနော် ။
အဲဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဘုန်းကြီးအရှုခိုင်းနေတဲ့နေတိုင်း ဝေဒနာကို ငြီးငွေ့ပြီးလာအောင် ရှုစမ်းပါ၊ စွန့်လွတ်ချင်လာအောင်နော်၊ စွန့်လွှတ်ချင်လာအောင်ရှုလိုက်၊ ရှုလိုက်ကြလို့ ရှိရင်ဖြင့် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ပဲ အဋ္ဌကထာဆရာကလည်း ရပြီဟေ့တဲ့ ၊ ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဖြစ်နေပဟ ( မှန် ပါ့ ) ။
ဒကာစိန်ရေ သိပ်ပြီး အားရှိစရာကောင်းသနော် ၊ ရှုကြစမ်းပါ၊ ရှုကြစမ်းပါဆိုတာ ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်း တာကနည်းနည်း၊ ခင်ဗျားတို့ ရှုလိုက်လို့ အမြတ်ထွက်မှာက များများပါ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ဟုတ်လား ။
ဒါ ရှုရမှာက နည်းနည်းပါ၊ အမြတ်ထွက်မှာက သ်ိပ်များတယ်ဆိုတာ သဘောကျပလား ( ကျပါပြီ ဘုရား ) ။
ကိုင်း - ဒါဖြင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီတရားဟာ သိပ်အဖိုးတန်လို့ ယနေ့ပြောနေရတယ် ။ တတိယမေးခွန်းက ရဟန်းက မေးပြန်တယ် ။
( ၃ ) ယခုဘ၀နိဗ္ဗာန်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်
အရှင်ဘုရား ယခုဘ၀ နိဗ္ဗာန်ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ တပည့်တော်သိချင်တယ် ( မှန်ပါ့ ) အမယ် မေး ချက်ကတော့ကောင်းလိုက်တာ၊ မေးချက်ကတော့ သိပ်ကောင်းတယ် ဒကာ ဒကာမတို့ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
ယခုဘ၀ နိဗ္ဗာန်ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ တပည့်တော်သိချင်တယ် ၊ ဟိုး … အလွယ်ကလေး ရဟန်းက တဲ့ ၊ ယခုဘ၀နိဗ္ဗာန်ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူ့အလုပ်စဉ်ကြည့်လိုက်ရင် သိသာပါတယ်ကွ တဲ့ ။
ဝေဒနာယ စေဘိက္ခုနိဗ္ဗိဒါ ၀ိရာဂါ နိရောဓါ အနုပ္ပာဒါ ၀ိမုတ္တောဟောတိ ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာနပ္ပတ္တောဘိက္ခူ တိ အလံ ၀စာနာယ
ဒိဋ္ဌဓမ္မ နိဗ္ဗာနာယ အလံဝစာနာယ - ချက်ချင်း ဒီဘ၀နိဗ္ဗာန်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ် လို့ဆိုတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရတယ် ( မှန်ပါ့ ) ဒါဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့ ၊ ဝေဒနာယ ဝေဒနာကို၊ နိဗ္ဗိဒါ - ငြီးငွေ့ခြင်းကြောင့်၊ ၀ိရောဂါ - တပ်ခြင်းကင်းခြင်းကြောင့် ဝေဒနာ ပစ္စယာတဏှာ သေသွားတာ လိုချင်သေးရဲ့ လား ( မလိုချင်ပါဘူးဘုရား ) နိရောဓါ - ဝေဒနာ၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့်၊ အနုပါဒါ အနုပါဒါယ - ဘယ်ဟာမှမဆက်၊ ဘယ်ဟာမှ မစွဲလမ်းမူ၍ ၊ ၀ိမုတ္တော - လွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗနပ္ပတ္တောတိ - ယခုဘ၀ နိဗ္ဗာန်ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ ဘိက္ခု - ရဟန်း ၊ ၀စာနာယ ဆိုခြင်းငှာ အလံ သေသေချာချာထိုက်သွားတယ်ကွာ ။
တစ်ခါတည်း ခင်ဗျားတို့ ဝေဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ဝေဒနာနိရောဓေါတိ ဝေဒနာကလည်း လိုချင် မှုမရှိပါဘူး ။ ဝေဒနာကလိုချင်မှုမရှိတော့ဘူး၊ ဝေဒနာကို ဘယ်ဝေဒနာကြိုက်သေးသတုံး၊ ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ မစွဲလမ်းတော့ဘူးတဲ့ ။
တစ်ခါတည်း ဝေဒနာကို ခင်တွယ်တဲ့သမားတွေ အကုန်လိုက်မသွားသေးဘူးလား (လိုက်သွားပါ တယ်ဘုရား ) ၊ အဲဒီလိုလိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒိဋ္ဌဓမ္မက - ယခုဘ၀ ၊ နိဗ္ဗာနက ငြိမ်းအေးတယ်၊ ယခုဘ၀တွင် နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမယ်ဆိုကွာတဲ့ ။
ကိုင်း ဒကာ ဒကာမတို့ အင်မတန်အားရှိ စရာကောင်းပါလား ( ကောင်းပါတယ်ဘုရား ) အင်မတန် အားရှိစရာကောင်းပါတယ် ။
အင်မတန်အားရှိစရာကောင်းပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမတွေက ထင်မှာပေါ့ ၊ သြော် - ဒို့သည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင် ဆရာဘုန်းကြီးကလည်း ဝေဒနာတွေချည်း ရှုခိုင်းတယ် ငြီးငွေ့ပြီလားလို့ဆိုရင် ငြီးငွေ့လာရင် အားကျလိုက်ပါ၊ ငါဒီဘ၀ကို နိဗ္ဗာန်ရမှာဟ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဝေဒနာကြီးကိုပဲ ရကိုမရချင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် အင်း - ဒါကတော့ ဖြစ်မှာ ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ အတိုင်း ဝေဒနာလုံးဝ မရချင်လို့ရှိရင်လည်း ဒီဘ၀ နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ် ။
တဏှာ၊ မာန ၊ ဒိဋ္ဌိတို့နဲ့ ဘယ်တော့မှသူတို့အပေါ်စွဲလမ်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လည်း ခင်ဗျားတို့ သန္တာန်ပေါ်လာလို့ရှိရင် ယခုဘ၀နိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ ငါဘုရားက သူတို့အတွက်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကွာတဲ့၊ ဆိုတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ ယနေ့တရားက အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့် စိတ်နှလုံးချလုံးအတော်ကောင်းပါ တယ် ။
အလုပ်မလုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့ သူ့မှာ ဒါလောက် ကျေးဇူးမများဘူး၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့် ၊ အင်း … တို့သည်ကားလို့ဆိုရင် ဘယ်အချိုးအစားထဲကပါလိမ့် ၊ ဘယ်ရောက်မှာပါ လိမ့်မတုံးလို့မေးတော့ ၊ ကွာတဲ့ …. ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ တခြားအောက်မေ့မနေပါနဲ့ ယခုဘ၀နိဗ္ဗာန ပုဂ္ဂိုလ်လုိ့ဆိုရမယ် ။
ဝေဒနာရှု၍နေခြင်းကြောင့်တဲ့ ဝေဒနာအပေါ်၌ ခင်တွယ်မှုတဏှာသေခြင်းကြောင့် ဝေဒနာချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလည်း အလင်းဓာတ်ကြီးမြင်နေခြင်းကြောင့် ဝေဒနာသုံးမျိုးအပေါ် ၌ဘယ်ဟာမှမခင်တွယ်ခြင်း ကြောင့် ယခုအခြေနေမျိုးရောက်အောင် ဒကာ ဒကာမ တွေကြိုးစားလို့ရှိရင်ဖြင့် အင်း … နိဗ္ဗာန်ယခုဘ၀ရ မယ်လို့ ဟောထားပြန်တော့ ဒကာစိန်ရေ ခါးတောင်ကြိုက်မဖြုတ်နဲ့နော် ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
အေးအားရှိတယ်ဆိုမှ ခါးတောင်းကြိုက်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ဘဲနေလို့လဲမဖြစ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူးလား၊ အင်း ခါးတောင်းကြိုက်ပြီး ဒီအတိုင်းနေလို့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူး၊ အင်းနိုးနိုးကြားကြားနဲ့ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်လိုက် လို့ရှိရင် ဒိဋ္ဌဓမ္မောတိ ပစ္စက္ခောအတ္တဘာဝေါလို့ဖွင့် ထားတယ် ၊ ပစ္စက္ခော ဆိုတာ ယခုပစ္စက္ခ၊ ဒိဋ္ဌဓမ္မောတိ ပစ္စက္ခောလို့ဟုတ်လား၊ ယခုဘ၀ ပစ္စုပ္ပန္နောလို့ ဆိုလိုက်တော့ ယခုဘ၀ ၊ ယခုပစ္စုပ္ပန်ခဏ၌ကိုပင်လျှင် ဒကာ ဒကာမတို့ နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်တဲ့ ။
ဝေဒနာပေါ်၌ ငြိးငွေ့အောင်ရှု၊ မလိုချင်အောင်ရှု၊ ရှုခဲ့လို့ ရှုတုန်းတန်ပြီဆိုမှဖြင့် ယခုဘ၀နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို့ ငါဘုရားကဆိုလိုပါတယ်၊ ဆိုတော့ဘယ်လောက်အားရှိစရာကောင်းလဲဟေ့ ဒကာစိန်က အားရှိစရာသိပ်ကောင်းတယ် ။
ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာဖြင့် အင်မတန်ထူးတဲ့ကံကြောင့် ဒီလိုအားကိုးလောက်တဲ့စကားတွေ အားကိုး လောက်တဲ့တရားတွေ ဦးလှဘူးတို့ ဒကာစိန်တို့ကြားရတယ် ။
ပါရမီထူး ၊ ဘုန်းထူး ၊ ကံထူး ၊ ဥာဏ်ထူး တွေ
ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာ၊ သူများပြောလည်း မဟုတ်ဘူး ၊ ဟုတ်ဖူးလား၊ ဘုရားကိုယ်တော် တိုင်ဟောရတာကိုလည်းကြားရပြန် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့လည်းကိုက်ပြန်ဆိုတော့ ဒကာစိန်ရေ အရင့်အရင်က ကျုပ်တို့ သည်ကားလို့ဆိုရင် ပါရမီထူး၊ ဘုန်းထူး ၊ ကံထူး ၊ ဥာဏ်ထူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့အ တွက်အမတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ် ။
အင်မတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ် ဒကာ ဒကာမတို့ ကြည့်စမ်း ဒီသုံးချက်မှာ ဒုတိယအချက်ထဲ လည်း ကျုပ်တို့အတွင်းဝင်နေကြပြီ၊ တတိယအချက်ထဲ လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေငြီးငွေ့နေပြီဗျ ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ကိုင်း တချို့ကလည်း စွန့်လွှတ်ဖို့ရာတဲတဲပဲကျန်တော့တယ်ဗျ ၊ အဲဒီတော့ ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုး အစား၌ သေသေချာချာဆိုက်ရောက်ပါပေါ့လား၊ ဟုတ်ပလား၊ သေသေချာချာဆိုက်ရောက်ပြီးသကာလ နေ ကြပြီ၊ ဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ပန်းတိုင်နားရောက်နေမှ မဆွတ်ဘဲနဲတော့ မပြန်ပါနဲ့ ( ဟုတ်ပါတယ် ဘုရား) ။
ပန်းတိုင်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အောင်ပွဲယူတာမဟုတ်လား၊ ငါက ပန်းရတယ်၊ သူကပန်းရတယ်၊ ရေတွေမြောကြတယ်၊ ဟုတ်လား၊ အဲဒီပန်းတိုင်နားရောက်နေမှဖြင့်ဟယ် မဆွတ်သေးပါဘူးလို့မပြန်လိုက်ပါ နဲ့ ၊ မပြန်လိုက်ပါနဲ့၊ နိဗ္ဗိန္ဒဥာဏ်ဆိုတာငြီးငွေ့တဲ့ဥာဏ် ( မှန်ပါ့ )
၀ိရာဂ ဆိုတာက၊ တကယ်ကို ဝေဒနာကြီးကိုရှင်းပစ်ချင်တဲ့ ဥာဏ်ပဲ၊ အဲဒီဥာဏ်ရောက်လာအောင် ဒကာ ဒကာမတွေ ကြိုးစားလိုက်ပါ၊ အဲဒါပန်းတိုင်ဖြစ်တယ် ။
အဲဒီတော့ ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာနပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ဖြင့် ဒကာစိန်ရေ လုပ်လိုက်၊ ( လုပ်မှာပါဘုရား ) ဟုတ်လား၊ ဒိဋ္ဌဓမ္မ နိဗ္ဗာန ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုတာ ယခုဘ၀ ၊ နိဗ္ဗာနဆိုတာငြိမ်းအေးတာ ၊ ဟာ ယခု ဘ၀ငြိမ်းအေးပြီးရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
နိဗ္ဗိန္ဒဥာဏ်ကနေပြီး စွန့်လွှတ်ချင်တဲ့ ဥာဏ်ရအောင် သွားလိုက်ကြစပ်းပါလို့ ၊ သေသေချာချာသတိ ပေးနေတယ်။
ကိုင်းဒါဖြင့် ယနေ့ဟောတဲ့အချက်သုံးချက်သည် ဒကာစိန်ရေ အင်မတန် အသုံးကျတယ်၊ ပထမတရားနာနည်းလည်းခင်ဗျားတို့ရကြပြီ၊ ကိုယ်တိုင်ကျင့်တဲ့အခါ ဘယ်ရောက်အောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတာ ကော ( ရပါပြီဘုရား ) ရပြီ ၊ နိဗ္ဗိန္ဒဥာဏ်ကနေပြီး လွတ်မြောက်ချင်တဲ့ ဥာဏ်ရအောင် ကျင့်ကွ ( မှန်ပါ့ ) ။
အဲဒီလိုကျင့်ပြီးပါပြီ ဘုရားဆိုတော့ ၊ အိုဒါတွေတွေ့တော့ ယခုဘ၀ နိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပေါ့ကွတဲ့ ၊ ကိုင်း ဘယ်လောက်အဖိုးတန်သွားသလဲ သေချာပြီ ။
သူများပြောလား၊ ကိုယ်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာလား ( ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ပြောတာပါ ဘုရား ) အေးဒါကြောင့် ။
ဒီပါဠိတော်ကို သေသေချာချာသာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၌ ရဟန်းတစ်ပါးကမေးလို့ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက အဖြေထုတ်တာပါဆိုတာကိုလည်း သဘောကျပလား ( ကျပါပြီ ဘုရား ) ။
ဟောတော့ ကျုပ်တို့ဖြင့် အားကိုးလုံးကြီးနဲ့ တွေ့ပြီးဒကာစိန် ( တင်ပါ့ဘုရား ) ။ အားလျှော့စရာတစ် ကွက်မှ မရှိပါဘူး ၊ အားလျှော့စရာမရှိပါဘူး အားလုံးပဲ အပြည့်အစုံရပြီသကာလနေပါပြီ ။
ကိုင်း - ဒါဖြင့် ကျုပ်တို့နေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်သည် ဒကာ ဒကာမတုိ့ ချက်ချင်းပဲ ၊ ဒီဘ၀နိဗ္ဗာန်ရ နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ထောက်ခံချက်ပေးပြီ၊ မပေးဘူးလား( ပေးပါတယ်ဘုရား )။
ဘုရားက တစ်ခွန်းနဲ့ အမှန်ဟောတယ်
အေးဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ထောက်ခံချက်ပေးတယ်ဆိုသဖြင့် အဒွေဇ္ဈဝစနာ ဗုဒ္ဓာတဲ့ ဒကာစိန်၊ ဗုဒ္ဓာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့သည် အဒွေဇ္ဈဝစနာ နှစ်ခွန်းမပြောကုန် ကြည့်စမ်း ဒီအတိုင်းလာတဲ့ဥာဏ်ကနေပြီး နိဗ္ဗိန္ဒဥာဏ်ကနေပြီး စွန့်လွှတ်ချင်တဲ့ ဥာဏ်သာ စွန့်မိလို့ရှိရင်ဖြင့် ယခုဘ၀ နိဗ္ဗာန်ကြီးကို ဒိဋ္ဌဓမ္မရောက်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်လို့ တစ်ခွန်းတည်းသုံးသွားတယ်။
တစ်ခွန်းတည်းသုံးသွားတဲ့အတွက် ဒကာ ဒကာမတို့ဆယ့်တစ်မီးငြိမ်း၍ အအေးဓါတ်ကြီးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန် ဓါတ်ကြီးဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဓါတ်ကြီးဟာ ၀င်းမလာဘူးလား ( ၀င်လာပါတယ် ) အဲဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမ တို့ အား ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ ဆယ့်တစ်မီးများငြိမ်းတဲ့အခါ တယ်သိသာသကိုးဗျ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဆယ့်တစ်မီးများငြိမ်းသွားလို့ ၊ သောတာပတ္တိ မဂ်ရလို့သောတာပတ္တိမဂ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆယ့်တစ်မီးများ ငြိမ်းလိုက်တယ်လို့ ဆိုရင်ပဲ ၊ အင်မတန်အဘိုးတန်တဲ့ အအေးဓာတ်ကြီးဟာဝမ်းထဲကို ရောက်ပြီးလာတော့ တာပေါ့ဗျာ၊ ဒါကြောင့် ဟဒယ သုသီတလ မဂ္ဂဒဿနေန သန္တာပဋ္ဌောကိုဗျာ ဟဒယ သုသီတလ မဂ္ဂဒဿနေ န နှလုံးထဲငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိသော မဂ္ဂသစ္စာပေါ်အောင် ထင်ရှားအောင်လို့ ပြပြန်တယ် ။
အားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ငြိမ်းအေးဓါတ်လာလို့ရှိရင် ငါဘာဖြစ်သတုံးဆိုတာ သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လို့ ( မှန်ပါ့ ) ဒါကြောင့် အရေးတကြီးထားပြီးပြောနေတာ ။
ဟဒယသုသီတလမဂ္ဂဒဿနေန နှစ်လုံးတွင် ငြိမ်းအေးခြင်းသဘောရှိသော မဂ္ဂသစ္စာဝမ်းထဲရောက် သဖြင့်၊ မဂ်ကလေးကတော့ ၀မ်းထဲရောက်ပြီဆိုပါတော့ဗျာ ( မှန်ပါ့ ) ။
သန္တာပဋ္ဌော၊ ထောင့်ငါးရာကိလေသာမီး၊ တစ်ဆယ့်တစ်ပါးသော မီးတွေငြိမ်းခြင်းသည် ဟောတိ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏ ဥာဏ်ထဲ၌ထင်လာ၏ ။
ခုနက ၀ိရာဂါယ - ဖြစ်ပြီဆိုမှဖြင့် ရာဂကလေးများ ကင်းပြီဆိုမှဖြင့် နှလုံးထဲကို မဂ်ကလေးကလည်း ရောက်လာတော့ ငြိမ်းအေးသွားတဲ့သဘောဟာ ဘာအေးတာနဲ့မှ မတူဘူးတဲ့ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) တစ်ခါတည်း အေးပေမှာပဲ ၊ ပဋိသမ္ဘိဒါ မဂ်ဋိကာ ဆရာ အကျယ်ဖွင့်တဲ့အတိုင်း အေးပေမှာပဲ ( မှန်ပါ ) ။
ခင်ဗျားတို့နေ့တိုင်း နေ့တိုင်းဟာက လောဘမီး၊ ဒေါသမီး ၊ မောဟမီးတွေက ပူလောင်နေတာ၊ ဣဿမီး ၊ မစ္ဆရိယမီး ၊ မာနမီးတွေဟင် ဒါတွေဟာလောင်ပြီး သကာလနေတော့ အငြိမ်းပြုစုလို့ရလား …. ( မရပါဘုရား ) ။
တွေးလေဆွေးလေ ၊ တွေးလေဆွေးလေ၊ အဲဒီတော့ မနေ့ညကလည်း မသက်သာ၊ ညကျတော့ ညရေးစိုးရိမ်ရ၊ နေ့ကျတော့ နေရေးအတွက်စားဖို့ သောက်ဖို့ရှာရလို့ပြည့်စုံမှု စိုးရိမ်ရကြောင့်ကြရ၊ အမလေး အမြဲပူလောင်နေတာပါလား ။
အဲဒီပူလောင်စာကြီးဟာ၊ ခုနကဝေဒနာပေါ်၌ သိနိုင်တဲ့ ဥာဏ်ကလေးဟာ ဖျတ်ခနဲ ၀မ်းထဲပေါ်ပေါက် ရောတဲ့ဗျာ၊ ဒီအပူလေးတွေဟာ အကုန်ငြိမ်းသကာလ ဒကာ ဒကာမ တို့အေးပြီးသကာလ သွားတော့တာပဲ ။
မဂ်စစ်လာပြီဆိုမဖြင့်လေ၊ ကိလေသာမီးတွေအကုန်ငြိမ်းပြီးအအေးဓါတ်ကြီးချည့်ပဲ၊ အားလုံးဆိုမှဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲအကုန်သိမ်းပြီးဝင်လာတော့တာပဲ ( မှန်လှပါဘုရား) ဒကာစိန်ရေ လောဘတို့ မောဟတို့ ဆိုတာ ဒီက ဒီက လာတာ ( မှန်ပါ ) ။
ကိလေသာမီးတွေငြိမ်း၊ အအေးဓါတ်အကုန်သိမ်းကြုံးပြီးသကာလဟာ ၀မ်းထဲရောက်လာတယ်၊ အဲဒီရောက်လာတာတွေက ဘာတွေတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ မဂ်စစ်တွေ ၊ ( မှန်ပါ့ )။
ကိလေသာမီးတွေ အကုန်ငြိမ်းလို့ အေးချမ်းတဲ့တရားဝမ်းထဲရောက်လာတော့၊ အအေးကြီးမအေးပေ ဘူးလား - ( အေးပါတယ်ဘုရား ) ခါတိုင်းကတော့ အမြဲတမ်းဖုတ်ပူမီးတိုက်၊ ငါးရံ့ ပြာလူးဆိုသလိုနေရတာ၊ မဟုတ်ဘူးလား … ( ဟုတ်ပါတယ် ) ။
အေး ဖုတ်ပူတွေထဲပြေးရတဲ့အခါကျတော့ ခြေထောက်ကလေးတကြွကြွနဲ့ မီးမြှိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိ ရင်ဖြင့် တွန့်လိမ်ပြီးသကာလနေတုံး၊ ( ဟုတ်လား ) ၊ ငါးရံ့ ပြာလူး ဆိုတဲ့ဥစ္စာသည် အရှင်ကြီးလူးနေတော့ လှိမ့်ခံပြီး နေရတော့တာပေါ့ ။
အဲဒီကဲ့သို့ ခင်ဗျားတို့မှာ လောဘမီး ၊ ဒေါသမီး၊ မောဟမီး တွေက ဒီနေရာကုလားထိုင်ပေါ်ထိုင်နေလို့ လည်းမပြီးသေးဘူး၊ ထိုင်နေလို့ မပြီးသေးဘူးဆိုလဲ ထရပြန်ရော ၊ထနေလို့လဲ မပြီးသေးဘူးဆိုပြန်တော့ လည်းဆိုပြန်တော့လည်း ထိုင်ရပြန်ရော၊ ( မှန်ပါ့ ) ။
အေး - ထိုင်ရ၊ ထရနေလို့လည်း မပြီးသေးဘူး၊ အိပ်ရင်လည်း အိပ်လိုက်အုံးမှ မအိပ်ပြန်ရောဂါလာ လိမ့်အုံးမယ် ( မှန်ပါ့ ) ဒီလိုပဲရောဂါကြောင့် နေရတာကတစ်မျိုး၊ ထိုင်နေရင်း မတ္တနဲ့ ကိလေသာဝင်လာလို့ သွားလိုက်ဦးမှထင်ပါရဲ့ ဆိုတဲ့ အပူမီး လောင်နေတော့ ဒီနေရာက မထိုင်နိုင် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
သွားနေရာကတစ်ဖန် နောက်ကစိတ်မချလို့ ပြန်လှည့်လာရပြန် ( မှန်လှပါဘုရား ) ကိုင်း ဒကာ ဒကာမတို့ ထိုင်ရင်လည်း အပူလောင် ထရင်ကော … ( အပူလောင်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ကိုင်းအိပ်ဦးမှ ထင်ပါရဲ့ ဆိုတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ မအိပ်ရင်ရောဂါရချေရဲ့ ဆိုပြီး သကာလ အပူ လောင်လို့ သွားအိပ်ရပြန်တယ် ( မှန်ပါ့ ) ။
အမလေး ဒကာ ဒကာမ တို့ထိုင်နေပြန်ကော ၊ ထိုင်နေလို့ရသလား ( မရပါဘူးဘုရား ) ထနေပြန်ကော … ( မရပါဘုရား ) အိပ်နေလို့ကော … ( မရပါဘုရား ) အိပ်နေပြန်တော့၊ မနက်မိုးလင်းလာ တော့အိပ်နေလို့ဖြစ်သေးဘူး၊ နေဖို့၊ စားဖို့၊ သောက်ဖို့ သားရေးသမီးရေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီး၊ အပူမီးက ထတောက်လိုက်တာနဲ့ ထရပြန်ရော … ( တင်ပါ့ ) ဟုတ်ပလား ။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့က အိပ်နေလည်းလောင်တယ်၊ ထိုင်နေကော … ( လောင်ပါတယ် ) သွားနေ ကော … ( လောင်ပါတယ် ) အဲဒီတော့ဒါကြောင့်လည်းသွားရင်းလည်းလောင်တယ်၊ အိပ်ရင်လည်းလောင် တယ်၊ ထိုင်ရင်းလည်းလောင်တယ်ဆိုတော့ ဒကာစိန်ကခပ်ကပ်ကပ်ခွေနေပါလားဗျာ ( မှန်ပါ့ဘုရား ဒီလိုမနေတော့ပါဘူး ) ။
ခွေနေလည်း လောင်ဦးမှာဘဲ ခွေနေလို့မဖြစ်သေးဘူး၊ ဟုတ်ပလား ၊ ညစာမနက်စာက လိုသေးတယ်၊ ဘယ်သူမှ ချက်ကျွေးမှာမဟုတ်ဘူး … ( မှန့်ပါဘုရား ) ဒကာစိန်အတွက်ကလေ၊ စားဖို့သောက်ဖို့လုပ်ရဦးမယ်ဆိုပြီး၊ ခွေရင်းနဲ့အပူလောင်တာနဲ့ထရပြန်ပြီ ( မှန်ပါ့ ) ။
ဒါဖြင့် ဘယ်လိုနေမတုံးဗျာ ဘယ်လိုမှနေလို့မရတော့ဘူး၊ လောင်နေမှာပဲ၊ အဲဒါတွေဟာကိလေသာ မီးတွေက အကုန်ငြိမ်း၊ ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ထိုင်နေလည်းထိုင်အေး၊ ထနေကော ( ထအေးပါဘုရား ) ။ အေးအိပ်နေကြတော့ကော ( အိပ်အေး ပါဘုရား ) ၊ ကွေးနေပြန်တော့ကော ( ကွေးအေးပါဘုရား ) ၊ အဲ … အဲဒီလိုနေတော့ သူ့သွားပြီးသကာလ ဘယ်အပူမီးကမှ မလောင်နိုင်တော့ဘူး၊ မဂ်ရေစင်တည်းဟူသောတရားက ၀မ်းထဲမှာရောက်သွားတော့လေ. ( မှန်ပါ့ ) တစ်ခါတည်းအေးနေရုံရှိတော့တာပဲ ။
ဒါကြောင့် ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်ဋီကာ ဆရာတော်က ဟဒယ သုတိတလမဂ္ဂဒဿနေန သန္တာပဋ္ဌော။
ဟဒယသုသိတလ မဂ္ဂဒဿနေန နှလုံးတွင်းငြိမ်းအေးခြင်းလက္ခဏာရှိအောင် မဂ္ဂသစ္စာဝမ်းထဲ ရောက်မှသာလျှင် သန္တာပဋ္ဌော - ကိလေသာအပူမီးကြီး နဂိုကလောင်နေတာ သိရပေတော့တယ်တဲ့ ။
ယောဂီတွေအားထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှာလက်ဦးကအပူလောင်နေတာ ခုမှပဲကင်းပေတော့တယ်တဲ့ ၊ နဂိုကအပူလောင်နေတာ အခုမဂ်ရောက်လာတော့မှ အေးသွားတော့မှ နဂိုကဘာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အခုမှလုံးလုံးကြီးပေါ်လာတယ် ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
အခုတော့ ဒကာ ဒကာမတွေက ဟုတ်လား ၊ ငရုတ်သီးပိုးဖြစ်နေတာ ၊မသိဘူး၊ ဂွကျလိုက်တာက (မှန်ပါ့ ) ငရုတ်သီးက ပင်ကိုက အပူကိုဗျ ၊အပူကိုစားတာဖြစ်နေတယ် ။
အပူတွေကဆိုက်နေပြီ ၊ ညည်းစရာလိုသေးလား ( မလိုပါဘုရား ) အပူထဲမှာမွေး၊ အပူထဲမှာနေ ၊ အပူထဲမှာသေ ၊ ဒီလိုဖြစ်နေတော့ ပူတယ်ဆိုတာညည်းသေးရဲ့ လား ။ ( မညည်းတော့ပါ ဘုရား ) ။
ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ အအေးဘယ်တော့မှ မမြင်ဘူးသေးလို့ ( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ ဟုတ်ပလား ။
အဲဒီတော့ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီကရှေ့ ၊ နိဗ္ဗိန္ဒဥာဏ်နဲ့ တရာိးကိုရှု၊ ရှုပြီးပြီအခြားမဲ့၌ ဒါတွေဒါတွေဝေဒ နာကြီးကို စွန့်လွှတ်ချင်တဲ့ဥာဏ်ရအောင် ရောက်သည့်တိုင်အောင် ၊ ရှုပေးလိုက်စမ်းပါ ဒကာစိန် ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ။
အဲဒီကဲ့သို့ ရှုပေးလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့် ၀ိရောဂေါတိမဂ္ဂေါ ဆိုတဲ့အတိုင်း ရာဂကင်းသွားတဲ့ ဥစ္စာသည်ကား ဆိုလို့ရှိရင် မဂ်ပေါ်လာတယ် ။
မဂ်ပေါ်လာရင် ခင်ဗျားတို့ ဆယ့်တစ်ပါးသော ကိလေသာမီးတွေ ကငြိမ်းအေးပြီး သကာလသွား တော့တယ်၊ ဆိုတာကိုယ်ဟာကိုယ်သိပါတယ်၊ ဟုတ်ပလား ( ဟုတ်ပါပြီ ) ။
သူများမေးရမှာလား ၊ ကိုယ်တိုင်သိရမှာလား .. ( ကိုယ်တိုင်သိရမှာပါဘုရား ) အေးကိုယ်တိုင်သိနေ တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မို့ ဧကန်ရောက်၊ တကယ်ရောက်ဖြစ်နေသောကြောင့် အင်းဒီအလုပ်သည်ကားဆိုလို့ရှိ ရင်ဖြင့် အေးချင်လို့လုပ်တာဖြစ်တော့ ခင်ဗျားတို့က အအေးကိုယူလိုက်ကြပ်ပါလို့ ဆရာဘုန်းကြီးက တိုက်တွန်းတယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ခင်ဗျားတို့က အေးချင်လွန်းလို့တဲ့ အချိန်ရှိတုန်း လျှောက်လုပ်နေရတယ်၊ ကြီးတဲ့အခါအေးအေးလေး နေနိုင်အောင်လို့၊ အဲဒီအအေးက အလကား၊ ( မှန်ပါ့ ) ကြီးပူ၊ ပူဦးမှာပဲ ၊ ငယ်ပူ ၊ ပူပြီးသကာလ အလတ်ပူ ၊ ပူဦးမှာပဲ ၊ အလတ်ပူ ပူပြီးသကာလ ကြီးတော့ အပူကကော … ( ပူဦးမှာပါဘုရား ) ။
အဲဒီတော့ ဒါအလကားပြောနေတာ ဒကာ ဒကာမတွေ ကြီးတော့ အေးအေးလေးနေထိုင်နိုင်ဖို့ ယခုအရွယ်ရှိတုန်းရောင်းရတယ် , ၀ယ်ရတယ် ၊ စုဆောင်းပြီးသကာလနေရတယ် ၊ ချွေတာနေရတယ်၊ ကြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် အေးအေးလေးနေရအောင်လို့ ပြောတယ်။ မထူးလာပါဘူးစိတ်ချပါ ။
မအေးပါဘူး စိတ်ချပါ ၊ ကြီးတော့ကြီးပူလာဦးမှာပဲ ၊ ဟုတ်ဘူးလား၊ ကြီးတဲ့အခါကျတော့လည်း ကြီးပူလာဦးမှာပဲ ၊ မထူးပါဘူး၊ ငယ်တုန်းကလည်း ငယ်ပူနဲ့နေခဲ့ရတယ်၊ အလယ် အလတ်မှာလည်း အလတ်ပူနဲ့နေခဲ့ရပြီ ( မှန်လှပါဘုရား )။
ကြီးတဲ့အခါကျမှပဲ ဇာတ်သိမ်းဦးမယ်ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား … ( မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ) ငယ်တုန်းက အပူလေးမွေးလာတဲ့ ဥစ္စာပဲ အရွယ်လတ်တုန်းကျတော့လည်းအပူနဲ့ပေါ့၊ ( မှန်ပါ့ ) အိုလာတော့ကော ( အပူနဲ့ ပါဘုရား ) ။
အေး သေခါနီးတောင် ခင်ဗျားတို့ အပူလောင် သေဦးမှာ ၊ ( မှန်ပါ့ ) ၊ အေး ဒါကြောင့် မြန်မြန်လုပ်ပါ လို့ပြောရတယ်၊ အပူလောင်သေတာက သားစိတ်မချ၊ သမီးစိတ်မချ၊ မျက်ရည်လေးကလယ်ကလယ်နဲ့ အခွဲ ကြီးခွဲရတော့မယ်ဆိုပြီး သကာလအပူမီးလောင်ပြီး သေလို့ မျက်ရည်တွေကို စီးကျတဲ့မျက်ရည် တွေကိုသွား ကြည့်စမ်း ဒကာစိန် ၊ နွေးလို့ ( မှန်ပါ့ ) အတွင်းဘယ်လောက်ပူတယ်ဆိုတာ ( မှန်ပါ့ ) ။
တော်တော်ဆူတဲ့နေရာနဲ့ မျက်ရည်နဲ့ဟာ အတော်ဝေးတယ်၊ ဆူတဲ့နေရာက ၀မ်းဗိုက်ထဲမှာဆူတာ ၊ မျက်ရည်က ပျော်ပြီးသကာလ လမ်းလျှောက်အေးလာတာတောင်မှ စမ်းကြည့်စမ်း၊ လက်ပေါ်ကျတော့လည်း မျက်ရည်က နွေးနေတာ ၊ ( မှန်လှပါဘုရား ) ၊ မဟုတ်ဘူးလား ။
အမလေး ဒကာ ဒကာမတွေ အဲဒီကဲ့သို့ သားစိတ်မချ၊ သမီးစိတ်မချနဲ့ ၊တစ်ခါတည်း၊ အတွင်းဘယ် လောက်အပူလောင်သလဲ ၊ မျက်ရည်တောင်နွေးပူလာတယ်ဆိုတာ သဘောကျပလား ( ကျပါပြီ ) ။
အခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေ ခင်ဗျားတို့ ၀ိပဿနာဥာဏ်က အားထုတ်လိုက်လို့ တစ်ခါတစ်လေများ ငိုချင်လာလို့ မျက်ရည်တွေကျတာတောင် စမ်းသပ်ကြည့်ပါတဲ့ ဒကာစိန်ရ မျက်ရည်တွေ အေးနေတာ ( မှန်လှပါဘုရား ) ဥာဏ်မဂ်ကိုဗျ ။
ဥာဏ်နဲ့ရှုလို့ရတဲ့မျက်ရည်၊ ဥာဏ်နဲ့ရှုလို့ရတဲ့ မျက်ရည်တဲ့ ဥာဏ်အားထုတ်လို့ရတဲ့မျက်ရည်၊ (မှန်ပါ့ ) အဲဒါကျတော့အေးတယ်၊ ခုနက ဒေါသနဲ့ထွက်တဲ့မျက်ရည်ကတော့ ( ပူပါတယ် ဘုရား ) မျက်ရည်ချင်း တောင်မတူဘူးဗျ ၊ ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
အဲဒါမဂ်ဥာဏ်မရသေးဘူး၊ မဂ်ဥာဏ်ရမယ်လို့ ရှေ့ တော်ပြေးလေး၊ ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ်နဲ့ ဖြစ်ပျက်ရှု နေတုန်းကိုပဲ၊ ငိုချင်လာတာတွေ ၀မ်းသာလို့ မျက်ရည်ထွက်လာတာတွေ ( မှန်ပါ့ဘုရား ) ။
ငိုလို့မျက်ရည်ထွက်လာတာတွေ ၊ မျက်ရည်ချင်းစမ်းကြည့်ပါ ဒကာစိန်ရ ၊ ခင်ဗျားဘယ်နှယ့်ထင် သလဲ ( အေးမှာပါပဲဘုရား ) ။
အေးမှာပဲဆိုရင်တော့ မျက်ရည်ပြင် မထွက်ဖူးသေးဘူး ထင်တယ် ခင်ဗျား ၊ ( မှန်ပါ့ မထွက်ဖူးသေးပါ ဘုရား ) မထွက်ဖူးသေးဘူး တစ်ခါမှမျက်ရည်မထွက်ဘူးသေးဘူး ၊ အဲဒီတော့ လူတိုင်းတော့ ဘယ်ထွက်မလဲ ပေါ့ဗျာ ။
တချို့ ကျတော့လည်း ဥာဏ်အားနဲ့ပဲ ပြီးရတယ်၊ အဲဒါတချို့ ကျတော့လည်း မျက်ရည်ထွက်လာတယ် ပီတိ၊ ၀မ်းမြောက်တာတွေကြောင့်လည်း မျက်ရည်ထွက်လာတယ် ။
အဲဒီမျက်ရည်တွေသည်ကားလို့ဆိုရင် ဘယ်မှာဟောသတုံးဆိုတော့ ရှင်နာဂသိန်နဲ့ မိလိန္ဒမင်းကြီးဆို တာရှိတယ် ၊ မိလိန္ဒမင်းကြီးက အရှင်ဘုရားတဲ့ ရယ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမျက်ရည်ထွက်တာပဲ ၊ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း မျက်ရည်ထွက်တာပဲ ၊ ဘာများ ထူးသတုံးဘုရား ။
မျက်ရည်သည်ကားလို့ဆိုရင် ဘေးရှိတဲ့မျက်ရည်၊ ဘေးမရှိတဲ့မျက်ရည် ပြောစမ်းပါဦးဘုရား ၊ ဆိုတော့ ၀ိပဿနာဥာဏ်အားထုတ်လို့ပေါ်လာတဲ့ မျက်ရည်တွေကျတော့ ဆေးမျက်ရည်အေးတယ် ( မှန်ပါ့ ဘုရား ) ။
သားရေးသမီးရေး စီးပွားရေးကြောင့် ပျက်စီးထွက်ရတဲ့ မျက်ရည်သည်ကားလို့ဆိုရင် ဘေး ၊ ဘေးမျက်ရည်တဲ့ ၊ ရိပ်မိကြပလား ( ရိပ်မိပါပြီ ) ။
အဲဒီတော့ ဒကာ ဒကာမတွေက ရှေးကထွက်ခဲ့တဲ့ သမုဒ္ဒရာရေလေးစင်းရေလောက်များတယ် ၊ ဆို တာ ဘေးကြောင့်ထွက်တဲ့မျက်ရည် ၊ ( ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဆေးအဖြစ်နဲ့ ထွက်တဲ့မျက်ရည်အေးပြောကြစမ်းပါဦး ၊ တရားအားထုတ်လို့မဟုတ်လား ၊ ၀မ်းသာတာနဲ့ လည်း ထွက်လာမှာပါပဲ ။ ဟုတ်ပလား ( ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား ) ။
ဒါ လူတိုင်းတော့ ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ၊ တချို့ ကျတော့ အရောင်အဆင်းအလင်းနဲ့ပဲပြီး သွားမယ်။
အဲဒါကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီဝမ်းသာမျိုးလေးတွေ့ အောင်ထိုင်၊ ပီတိခန်းကျတော့လာတယ်နော် - ( မှန်ပါ့ ) ပီတိခန်းကျတော့လာတယ်၊ သြဘာသ၊ ပီတိ၊ ပဿတိဆိုတော့၊ ဥဒယဗ္ဗယဥာဏ်ရင့်သန်လာတဲ့ အခါကျတော့ ဒကာစိန်ရေ - ပီတိတွေဟာ ၀မ်းသာလာလိုက်တာ မျက်စိထဲကမျက်ရည်တွေ တစ်ပေါက် ပေါက်ကျတယ် ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
ဘယ်တုန်းကမှ မတွေ့ဘူးတဲ့ အာရုံတွေ့ရတာကိုဗျ ၊ အဲဒီကဲ့သို့ တွေ့ တဲ့အခါကျတော့ ၀မ်းမသာဘဲနေနိုင်ပါ့မလား ၊( မနေနိုင်ပါဘုရား ) ၀မ်းသာတယ်ဆိုရင်ပဲ မျက်ရည်တွေက စီးလာအောင် မကျ ပေဘူးလား ( ကျပါတယ်ဘုရား ) ။
အေးဒါတွေသည်ကားဆိုလို့ရင်ဖြင့် ဥာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မျက်ရည်တွေဖြစ်လာသောကြောင့် ဒကာ ဒကာမတို့ ထွက်ကောင်းတဲ့မျက်ရည်ဗျ ၊ အဲဒီမျက်ရည်စမ်းသမ်ကြည့်ရင်အေးရမတဲ့ ( မှန်ပါ့ ) ။
ခင်ဗျားတို့ ဒေါသကြောင့် ဖြစ်တဲ့မျက်ရည်တွေကတော့ ( ပူပါတယ်ဘုရား ) အင်း - ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးသည်ကားလို့ဆိုလို့ရှိရင် ဒကာ ဒကာမတို့ကို သတိပေးရတယ် ( မှန်လှပါ ) ။
မျက်ရည်အေးလေးကျလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာ ၊ခင်ဗျားတို့ စိတ်ချရတဲ့ လမ်းနီးနေပြီ ၊ မျက်ရည်ပူကြီးတွေနဲ့ ဆိုရင်ဖြင့် မျက်လုံးကိုတစ်ခါတည်းနီပြီး သကာလပွတ်ထားလိုက်တာလဲလွန်လို့ ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲမမေးရပါဘူး၊ စိတ်ဆိုးလာတယ်ပြောမှာပါပဲ ( ပြောပါတယ်ဘုရား ) ။
အဲဒါ မစီစစ်ရဘူးလား ( စစ်ရပါတယ်ဘုရား ) အေးဒါကြောင့် ဥာဏ်နဲ့ရတဲ့ မျက်ရည်က ဆေးမျက်ရည်လား ( ဆေးမျက်ရည်ပါဘုရား ) ။
သားရေး ၊သမီးရေး ၊ စီးပွားရေးနဲ့ ရတဲ့ မျက်ရည်က ( ဘေးမျက်ရည်ပါဘုရား ) ဘေးသင့်တဲ့မျက်ရည်နဲ့ ဆေးမျက်ရည်ကို ဆေး မျက်ရည်ချည်းကျအောင်ဖြင့် ဒကာ ဒကာမတွေ ကြိုးစားလိုက် ကြပါဦး၊ ၀မ်းသာလုံးဆို့အောင်ပေါ့ဗျာ … ( မှန်လှပါဘုရား ) ။
အဲဒီလိုပဲ ဒကာ ဒကာမတွေ ဆုတွေ လာဘ်တွေ အင်မတန် အဘိုးတန်ပြီဆိုတဲ့ အချေအနေရောက် မှ စိတ်ချလက်ချနေလိုက်ကြစမ်းပါ၊ ( မှန်ပါ့ ) စိတ်ချလက်ချနေလိုက်ကြစမ်းပါ ။
ယခုအချိန်မှာလည်း ဒကာ ဒကာမတွေ စိတ်ချစရာတွေ နည်းနည်းလိုနေသေးတယ်၊ စိတ်ရှုတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေဖြစ်ပျက်မြင်ကြပါတယ်၊ ဥဒယဗ္ဗယရပါတယ်၊ တချို့ လည်း ငြီးငွေ့လာတယ် ။
သို့သော အချက်ကလေးတွေက ၊ တစ်ချက်လောက်နှစ်ချက်လောက်ကျန်ကျန်နေသေးတယ်၊ ဒကာစိန်ရ - ( မှန်ပါဘုရား ) အဲဒီကဲ့သို့ မကျန်ရအောင် ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ ဒကာမတွေသည် ၊ သေသေချာချာ ကြိုးစားလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဒိဋ္ဌဓမ္မ နိဗ္ဗာန ပုဂ္ဂိုလ်ထဲဝင်အောင်လုပ်လိုက်ပါ ( မှန်လှပါ ဘုရား ) ။
ဒိဋ္ဌ ဆိုတာက ယခုဘ၀ ၊ ဓမ္မဆိုတာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အားထုတ်မည့် တရား ၊ နိဗ္ဗာန ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာက မဂ်ရလို့ရှိရင် တကယ်တမ်းကိလေသာမီး ၊ ဟုတ်လား ၊ အပူမီးတွေ ၊ အပူငြိမ်းပြီးသကာလ နိဗ္ဗာန ဓါတ်ကြီးရတယ်လို့ပြောတာ ။
ကိုင်း ဒကာ ဒကာမတို့ သေသေချာချာကြိုးစားရင် ၊ သေသေချာချာရမယ် ဆိုတာသည် ပေါ်လာကြ ပလား ( ပေါ်လာပါပြီဘုရား ) ။
ကိုင်း ဒကာ ဒကာမတို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဘုန်းကြီးပြောတော့မယ် ၊ ပထမရှေဦးစွာ ဓမ္မကထိကကိုမေးတယ်၊ သံဝေဂရအောင်၊ ဝေဒနာပေါ်၌၎င်း ၊ ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌၎င်း၊ သံဝေဂရအောင် ၊ ငြီးငွေ့အောင်များများဖြစ်အောင် ဟောနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် ဓမ္မမထိကပဲ ။
ဓမ္မာနု ဓမ္မပဋိပန္ဒ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဘာပါလိမ့်မလဲ မေးတဲ့ အခါကျတော့ ဝေဒနာရှုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရား ၊ ဝေဒနာကို ငြီးငွေ့တက်လာအောင်၊ ဝေဒနာကို စွန့်လွတ်ချင်တဲ့ သဘောပေါ်အောင် ၊ ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အား ထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကျလာလို့ရှိရင်ဖြင့်၊ အဲဒါ ဓမ္မနု ဓမ္မပဋိပန္န ပုဂ္ဂိုလ်။
ယခုဘ၀ နိဗ္ဗာန်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
( ၃ ) နံပါတ်ကတော့ ၊ ဒကာ ဒကာမတို့ ဒိဋ္ဌဓမ္မ နိဗ္ဗာန ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဘယ်ဟာပါတုံးဆိုတော့ ဝေဒနာယ ဒေဘိက္ခု နိဗ္ဗိဒါ ၀ိရောဂါ နိရောဓါ အနုပ္ပာဒါယ ၀ိမုတ္တောဟောတိ ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန ပတ္တော ဘိက္ခူတိ အလံ ၀စနာယ ။
ဘုရားကဟောထားပြန်သောကြောင့် ဝေဒနာကို ငြီးငွေ့ခြင်းကြောင့်၊ ဝေဒနာအပေါ်၌ တပ်မက်ခြင်း ကြောင့်၊ ဝေဒနာချုပ်ရာကို လုံးဝကြိုက်နေသောကြောင့် ဘယ်ဝေဒနာမှ မစွဲလမ်းဘဲနဲ့နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ ၊ ဒိဋ္ဌဓမ္မ နိဗ္ဗာန ၊ ယခုဘ၀ နိဗ္ဗာန်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ ငါဘုရားက ဆိုပါတယ်ကွာတဲ့ ။
ကိုင်း ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက အစီအစဉ်ကိုင်ပြီးသကာလ ၊ ဒကာ ဒကာမတွေအား ဟောပြီ၊ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့သည် ကားလို့ဆိုရင်၊ လုပ်နေတဲ့အလုပ်လည်း ၊ အင်မတန်မှ နေရကျတယ် ။
မရပ်လိုက်ပါနဲ့ဦး ၊ မရပ်လိုက်ပါနဲ့ဦး၊ ဒီဝေဒနာကြီးကို စွန့်လွန်ချင်တဲ့ အချေအနေရောက်အောင် ရှုပေးလိုက် စမ်းပါဦး ။
အဲဒီကျမှ ရပ်ပါ၊ ဒီပြင်နေရာမရပ်လိုက်ပါနဲ့ ၊ ( မှန်လှပါဘုရား ) ရှင်းပြီလား … ( ရှင်းပါပြီဘုရား ) ။
ယခုဘ၀နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကျင့်ပါ အလုပ်စခန်းပါပြီလား၊( ပါပါပြီဘုရား ) အေးအလုပ်စခန်းသည် ကားလို့ဆိုရင် ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန - ယခုဘ ၀နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ကျင့်ပါ၊ ဝေဒနာငြီးငွေ့ခြင်း၊ ထိအောင်လည်း ကျင့်ရမယ်နော်၊ ဝေဒနာချုပ်ငြိမ်းဖို့ စွန့်ခြင်းကကော ( ကျင့်ရပါတယ် ) ။
အဲဒီကဲ့သို့ ဝေဒနာလည်းငြီးငွေ့မယ် ၊ ဝေဒနာထင်ခြင်းကိုလဲ စွန့်လွှတ်တဲ့ ဥာဏ်လည်းလာမယ်ဆိုရင် ဖြင့် ယခုဘ၀နိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ ကိုယ်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၊ ဘုရားတာဝန်ခံတယ်၊ ရှင်ပလား ( ရှင်းပါပြီ ) ကိုင်း ဒီတွင်တော်ကြဦးစို့ …. ။
သာဓု ၊ သာဓု ၊ သာဓု ။